အိမျသုံး လြှို့ဝှကျနညျးလမျးလေးတှေ တနျဘိုး အလှနျရှိသော သဘာဝဆေးမွီးတိုမြား - Latest Myanmar News
အိမျသုံး လြှို့ဝှကျနညျးလမျးလေးတှေ တနျဘိုး အလှနျရှိသော သဘာဝဆေးမွီးတိုမြား
မဖွဈမနေ မှတျသားထိုကျသော အိမျသုံး လြှို့ဝှကျနညျးလမျးလေးတှေ တနျဘိုး အလှနျရှိသော သဘာဝဆေးမွီးတိုမြား
ကွကျဟငျးခါးအစကေို့ ဆားနှငျ့ရောပွီးညကျအောငျကွိတျပါ။ ရလာသောအနှဈကိုအရကျအနညျးငယျနှငျ့သငျ့ရုံဖြျောပွီးနောကျ ရလာသော အရညျနှငျ့ဝကျခွံမြားကိုလိမျးပေးပါက 0ကျခွံမြား ပြောကျပါသညျ။
ငါးရိုးစူးလြှငျ လညျခြောငျးထဲမှ ထုတျမရပါကလြှငျမွနျစှာကွကျဥအစိမျးကိုခှဲပွီး တဈခါတညျးမြိုခလြိုကျပါက ငါးရိုးသညျတဈခါတညျးလြှောကသြှားပါလိမျ့မညျ။
ခွထေောကျကို သံစူးလြှငျ သကျသာနညျး
သံစူးသောနရောတှငျ ဆားနှငျ့ဂငျြးကိုကွိတျပွီး အုံပေးပါ။ သံအဆိပျရှိသမြှ၎င်းငျးဂငျြးထဲသို့ကလြာပါလိမျ့မညျ။တဈနလြေှ့ငျ နှဈခါအုံပေးရပါသညျ။
အမြိုးသမီးမြား ဆံပငျကြှတျသညျဆိုပါကပြားရညျနှငျ့ဂုံညငျးခဲတို့ကိုသှေးပွီး ဆံပငျကို လိမျးပေးပါက ဆံပငျမြားကြှတျထှကျခွငျး မဖွဈနိုငျတော့ပါ။
ကိုယျလကျပငျပနျးပွီးခေါငျးကိုကျလြှငျ သံပုရာသီးတဈခွမျးကိုအနှပျရညျကကြထြဲသိုိ့ ထညျ့ပွီးသောကျပါက ခေါငျးကိုကျသကျသာပြောကျကငျးပါသညျ။
ဗာဒံစအေ့နညျးငယျကို ညကျအောငျထောငျးပွီး နှားနို့နှငျ့ရောစပျပွီးနစေ့ဉျမှနျမှနျသောကျပါက နှလုံးရောဂါနှငျ့နှလုံးတုနျမောပနျးတာ ပြောကျကငျးပါသညျ။
ဆားအလှနျပါသော ငံလှနျးသညျ့ငါးခွောကျကို မငံစလေိုလြှငျဆားမြားကိုရနှေငျဖြျောပွီး ထိုဆားရညျထဲတှငျ ဆားအလှနျငံသောငါးခွောကျကိုစိတျပွီးထားလြှငျ မငံတော့ဘဲ့ အရသာ အလှနျကောငျးလာပါသညျ။
အမဲသား၊ ဆိတျသားခကျြသောဟငျးအိုးထဲသို့မီးသှေး အနညျးငယျထညျ့ပွီး ခကျြပါကမကောငျးသျောအညှီနံ့မြားပြောကျပါသညျ။
သဘာဝကြောကျသှေးအား ဘယဆေးဆိုငျမှာ ဝယျယူပွီးမကြီးစခေ့နျ့အားသံပရာရညျနှငျ့ဖြျောပွီး မနကျတဈကွိမျညတဈကွိမျပုံမှနျနှဈဆယျ့လေးရကျပတျလညျအောငျ သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့သှေးတိုးရောဂါမြားအားပြောကျကငျးစပေါသညျ။
ပနျးခိုငျ၊ ပနျးခကျထညျ့သညျ့ ပနျးအိုးထဲသို့ ယမျးစိမျး အနညျးငယျထညျ့ပွိးမှပေေးပါက ပနျးမြားတာရှညျခံပါလိမျ့မညျ။
ကုလာထိုငျမြားအောကျက ညှတျနလြှေငျ ခိုငျပွီးဖွောငျ့မတျအောငျ လုပျလိုပါက၎င်းငျးကိုရနှေေးနှငျ့ ဆေးကွောပွီးနောကျ လဟောပွငျမှာ လှနျးထားပါ။
အဝတျအထညျပိတျစမြားတှငျ မှငျစှနျးလြှငျ အမဲဆီကို အရညျအဖြျောပွီးမှငျအစှနျးကှကျပျေါသို့ခပြါ။ ထုိ့နောကျရနှေငျ့ လြှျောဖှပျလြှငျမှငျစှနျးပြောကျပါသညျ။
ဝတျအထညျမြား လကျဖကျရညျစှနျးလြှငျ ရနှေေးပူပူနှငျ့ ထိုစှနျးနသေောနရောကိုလောငျးပါက ပြောကျပါသညျ။
အကငြ်္ီအဝတျအထညျမြားပျေါတှငျ ဆေးလိပျမီးပှါးကသြျောလညျးကောငျး၊မီးပူကြှမျးလြှငျလညျးကောငျး၊ ကွကျသှနျကို ထကျခွမျးခှဲပွိး ပှတျတိုကျပါကပြောကျပါသညျ။
အဝတျအထညျမြား သံခြေးစှတျးလြှငျ သံပုရာရညျတှငျ့ ဆားဖြျောပွီးထိုအစှနျးကှကျနသေောနရောကို ဆှတျဖွနျးပွီးလြှငျ အထညျကိုနပေူတှငျလှနျးပါ။အကှကျမပြောကျလြှငျ နှဈခါသုံးခါထပျပွီးသုတျလိမျးပေးပါ။
အဝတျအထညျပျေါရှိသော ဆီကှကျကို ဇဝတျသာပါသောရနှေေးပူပူဖွငျ့ဆေးကွောလြှျောဖှပျပေးပါက ဆီအစှနျးပြောကျပါသညျ။
ဆျောဒါမှုနျ့ကို ရနှေေးပူပူတှငျဖြျောပွီး ဆပျပွာရညျထဲသို့ ထညျ့ပွီးလြှျောပေးပါ။
စငျကွယျသော အဝတျဖွူကိုရဆှေတျပွိး ဖားဥစှဲနသေော အမဲပြောကျမြားအပျေါကဖုံးအုပျပွီး မီးကူတိုကျလြှငျ ဖားဥမြား ပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မညျ။
သက်ကလပျထညျ၊ ဖလနျနယျစသညျတို့ကို လြှျောဖှပျပွီးကွိုးတနျးပျေါတှငျအဝတျကိုရမေညှဈဘဲ ဖွနျ့လှနျးထားပါက အဝတျမတှနျ့တော့ပါ။
ရထေဲတှငျ ဇဝတျသာရညျခပျပွဈပွဈထညျ့ပွီး သှေးပနေသေောအဝတျအထညျကိုအတျောကွာကွာစိမျထားပွီးမှလြှျောဖှပျပေးပါက သှေးစှနျးပြောကျပါသညျ။
လှျောပွီးသား ဆိုဒါမှုနျ့နှငျ့သှားတိုကျပွိး ရနှေေးနှငျ့ ကငျြးပဈလြှငျသှားကိုကျသှားနာသကျသာပါသညျ။
ရနှေေးအပွညျ့ရှိသညျ့ ပေါကျဝကယျြသောပုလငျးတဈလုံးကိုယူပွီးဆူးစူးသောနရောကို ပုလငျးပျေါမှဖိနှိပျပါ။အသားသညျပူနှေးသညျ့အငှဖွေ့ငျ့ပုလငျးထဲသို့အနညျးငယျစူးဝငျသညျနှငျ့(၃. ၄ ) မီနဈကွာသောအခါအဆူးကလြာပါလိမျ့မညျ။
ရနှေေးဖွဈစေ၊ မီးပူဖွဈစေ၊ လကျခွေ စသညျတို့ကို အပူလောငျလြှငျရတှေငျဆားကိုမြားမြားထညျ့၊ ပွဈနအေောငျဖြျောပွီး ၎င်းငျးအပူလောငျသညျ့နရောကိုသုတျလိမျးပေးပါ။
ကွှကျမြားသှားလာလရှေိ့သော နရောမြားမှာ ပူစီနံရှကျဖွဈစေ၊ပငျစိမျးရှကျဖွဈစထေားပါက ကွှကျမြားသခြောပေါကျထှကျပွေးပါလိမျ့မညျ။
စငျကိုမွကျအား ဆှဲနှုတျပွီး အမွဈဖွူဖွူလေးတှကေို ဓါးနှငျ့ဖွတျယူပါ။နို့ဆီဗူးတဈလုံးစာအား ရပွေောငျအောငျ ဆေးပွီး ဒနျအိုးထဲသို့ထညျ့ပါ။နနှငျးမှုနျ့ကျောဖီတဈဇှနျးစာလောကျ ထညျ့ပါ။
ကွကျခိုးမှိုငျးအနညျးငယျထညျ့ပါ။ ရသေောကျရခှေကျနှငျ့သုံးခှကျစာထညျ့ ပွိး တဈခှကျစာကနျြသညျအထိကွိုခကျြပါ။ ပွီးလြှငျသခြောစှာ အမှိုကျမြားစဈပွိး နစေ့ဉျသောကျပါ။ရောဂါရငျ့လြှငျ့ ခုနှဈရကျ၊ ရောဂါနုလြှငျ ငါးရကျနှငျ့ ပြောကျပါသညျ။
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးပွီး အသကျရှူမဝခွငျး၊ လေးလံထိုငျးမှိုငျးခွငျး၊မကွာဏသကျပွငျးခခြွငျး၊ မောခွငျးမြားအတှကျ ဂငျြးဆယျ့ငါးကပျြသားအားကွအေောငျထုထောငျးပွိး ပွညျဝငျဒနျအိုးထဲသို့ထညျ့ပါ။
ဆားလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ။ပွီးလြှငျရမြေားမြားထညျ့ပွိးဆူအောငျပွုတျပါ။ ခွထေောကျစိမျရနျဇလားတဈခုခုထဲသို့ လောငျးထညျ့ပါ။ ခွဖေဝါးအား ပရုတျဆီ(သို့) လိမျးဆေးအဆီတမြိုးမြိုးသုတျလိမျးပါ။ပွီးလြှငျ ခွောကျထောကျနှဈခြောငျးစလုံးအားဂငျြးပွုတျရေ အပူခံနိုငျရုံထားပွိး စိမျပါ။
နောကျတဈဦးမှခွဖေဝါးမှာရှိသော အကွောမြားပွအေောငျ လကျမဖွငျ့ နှိပျနယျပေးပွီးခွခေုံနှငျ့ ခွသေလုံး အား သှေးလှညျ့ပတျမှူကောငျးအောငျ နှိပျနယျပေးပါ။ထိုနညျးအတိုငျး သုံးရကျတဈကွိမျပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ သကျသာလာပါလိမျ့မညျ။ ။
အိမ်သုံး လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းလေးတွေ တန်ဘိုး အလွန်ရှိသော သဘာဝဆေးမြီးတိုများ
မဖြစ်မနေ မှတ်သားထိုက်သော အိမ်သုံး လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းလေးတွေ တန်ဘိုး အလွန်ရှိသော သဘာဝဆေးမြီးတိုများ
ကြက်ဟင်းခါးအစေ့ကို ဆားနှင့်ရောပြီးညက်အောင်ကြိတ်ပါ။ ရလာသောအနှစ်ကိုအရက်အနည်းငယ်နှင့်သင့်ရုံဖျော်ပြီးနောက် ရလာသော အရည်နှင့်ဝက်ခြံများကိုလိမ်းပေးပါက 0က်ခြံများ ပျောက်ပါသည်။
ငါးရိုးစူးလျှင် လည်ချောင်းထဲမှ ထုတ်မရပါကလျှင်မြန်စွာကြက်ဥအစိမ်းကိုခွဲပြီး တစ်ခါတည်းမျိုချလိုက်ပါက ငါးရိုးသည်တစ်ခါတည်းလျှောကျသွားပါလိမ့်မည်။
ခြေထောက်ကို သံစူးလျှင် သက်သာနည်း
သံစူးသောနေရာတွင် ဆားနှင့်ဂျင်းကိုကြိတ်ပြီး အုံပေးပါ။ သံအဆိပ်ရှိသမျှ၎င်းဂျင်းထဲသို့ကျလာပါလိမ့်မည်။တစ်နေ့လျှင် နှစ်ခါအုံပေးရပါသည်။
အမျိုးသမီးများ ဆံပင်ကျွတ်သည်ဆိုပါကပျားရည်နှင့်ဂုံညင်းခဲတို့ကိုသွေးပြီး ဆံပင်ကို လိမ်းပေးပါက ဆံပင်များကျွတ်ထွက်ခြင်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
ကိုယ်လက်ပင်ပန်းပြီးခေါင်းကိုက်လျှင် သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းကိုအနှပ်ရည်ကျကျထဲသိုိ့ ထည့်ပြီးသောက်ပါက ခေါင်းကိုက်သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။
ဗာဒံစေ့အနည်းငယ်ကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး နွားနို့နှင့်ရောစပ်ပြီးနေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်ပါက နှလုံးရောဂါနှင့်နှလုံးတုန်မောပန်းတာ ပျောက်ကင်းပါသည်။
ဆားအလွန်ပါသော ငံလွန်းသည့်ငါးခြောက်ကို မငံစေလိုလျှင်ဆားများကိုရေနှင်ဖျော်ပြီး ထိုဆားရည်ထဲတွင် ဆားအလွန်ငံသောငါးခြောက်ကိုစိတ်ပြီးထားလျှင် မငံတော့ဘဲ့ အရသာ အလွန်ကောင်းလာပါသည်။
အမဲသား၊ ဆိတ်သားချက်သောဟင်းအိုးထဲသို့မီးသွေး အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ချက်ပါကမကောင်းသော်အညှီနံ့များပျောက်ပါသည်။
သဘာဝကျောက်သွေးအား ဘယဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်ယူပြီးမကျီးစေ့ခန့်အားသံပရာရည်နှင့်ဖျော်ပြီး မနက်တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန်နှစ်ဆယ့်လေးရက်ပတ်လည်အောင် သောက်သုံးခြင်းဖြင့်သွေးတိုးရောဂါများအားပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ပန်းခိုင်၊ ပန်းခက်ထည့်သည့် ပန်းအိုးထဲသို့ ယမ်းစိမ်း အနည်းငယ်ထည့်ပြိးမွှေပေးပါက ပန်းများတာရှည်ခံပါလိမ့်မည်။
ကုလာထိုင်များအောက်က ညွတ်နေလျှင် ခိုင်ပြီးဖြောင့်မတ်အောင် လုပ်လိုပါက၎င်းကိုရေနွှေးနှင့် ဆေးကြောပြီးနောက် လေဟာပြင်မှာ လှန်းထားပါ။
စာအုပ်များကို အဖုံးအကာမရှိသော စာအုပ်စင်မှာ ထင်ပြီးထားပါ။
အဝတ်အထည်ပိတ်စများတွင် မှင်စွန်းလျှင် အမဲဆီကို အရည်အဖျော်ပြီးမှင်အစွန်းကွက်ပေါ်သို့ချပါ။ ထုိ့နောက်ရေနှင့် လျှော်ဖွပ်လျှင်မှင်စွန်းပျောက်ပါသည်။
ဝတ်အထည်များ လက်ဖက်ရည်စွန်းလျှင် ရေနွေးပူပူနှင့် ထိုစွန်းနေသောနေရာကိုလောင်းပါက ပျောက်ပါသည်။
အင်္ကျီအဝတ်အထည်များပေါ်တွင် ဆေးလိပ်မီးပွါးကျသော်လည်းကောင်း၊မီးပူကျွမ်းလျှင်လည်းကောင်း၊ ကြက်သွန်ကို ထက်ခြမ်းခွဲပြိး ပွတ်တိုက်ပါကပျောက်ပါသည်။
အဝတ်အထည်မျးမှာ ကွမ်းသွေးစွန်းလျှင် နို့ရည်ကို စွန်းနေသောနေရာပေါ်သို့ဆွတ်ဖြန်းပေးပါက နို့ရည်ခြောက်သွားလျှင် အစွန်းပျောက်ပါသည်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥရည်အစွန်းကွက်သော အဝတ်များကို ရေမှာ ကြာကြာစိမ်ထားပါ။ပြီးတော့မှ နာနာပွတ်ပြီးလျှော်လျှင် ပျောက်ပါသည်။
အဝတ်အထည်များ သံချေးစွတ်းလျှင် သံပုရာရည်တွင့် ဆားဖျော်ပြီးထိုအစွန်းကွက်နေသောနေရာကို ဆွတ်ဖြန်းပြီးလျှင် အထည်ကိုနေပူတွင်လှန်းပါ။အကွက်မပျောက်လျှင် နှစ်ခါသုံးခါထပ်ပြီးသုတ်လိမ်းပေးပါ။
အဝတ်အထည်ပေါ်ရှိသော ဆီကွက်ကို ဇဝတ်သာပါသောရေနွေးပူပူဖြင့်ဆေးကြောလျှော်ဖွပ်ပေးပါက ဆီအစွန်းပျောက်ပါသည်။
ဆော်ဒါမှုန့်ကို ရေနွေးပူပူတွင်ဖျော်ပြီး ဆပ်ပြာရည်ထဲသို့ ထည့်ပြီးလျှော်ပေးပါ။
စင်ကြယ်သော အဝတ်ဖြူကိုရေဆွတ်ပြိး ဖားဥစွဲနေသော အမဲပျောက်များအပေါ်ကဖုံးအုပ်ပြီး မီးကူတိုက်လျှင် ဖားဥများ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။
သက္ကလပ်ထည်၊ ဖလန်နယ်စသည်တို့ကို လျှော်ဖွပ်ပြီးကြိုးတန်းပေါ်တွင်အဝတ်ကိုရေမညှစ်ဘဲ ဖြန့်လှန်းထားပါက အဝတ်မတွန့်တော့ပါ။
ရေထဲတွင် ဇဝတ်သာရည်ခပ်ပြစ်ပြစ်ထည့်ပြီး သွေးပေနေသောအဝတ်အထည်ကိုအတော်ကြာကြာစိမ်ထားပြီးမှလျှော်ဖွပ်ပေးပါက သွေးစွန်းပျောက်ပါသည်။
လှော်ပြီးသား ဆိုဒါမှုန့်နှင့်သွားတိုက်ပြိး ရေနွေးနှင့် ကျင်းပစ်လျှင်သွားကိုက်သွားနာသက်သာပါသည်။
ရေနွေးအပြည့်ရှိသည့် ပေါက်ဝကျယ်သောပုလင်းတစ်လုံးကိုယူပြီးဆူးစူးသောနေရာကို ပုလင်းပေါ်မှဖိနှိပ်ပါ။အသားသည်ပူနွေးသည့်အငွေ့ဖြင့်ပုလင်းထဲသို့အနည်းငယ်စူးဝင်သည်နှင့်(၃. ၄ ) မီနစ်ကြာသောအခါအဆူးကျလာပါလိမ့်မည်။
နူးညံ့သောအဝတ်စကို နို့ထဲတွင်စိမ်ပြိး ကိုက်ခဲသောနေရာကိုပွတ်ပေးလျှင်အလွန်ဆိုးသောရောဂါဖြစ်စေကာမူ ချက်ချင်းပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ရေနွေးဖြစ်စေ၊ မီးပူဖြစ်စေ၊ လက်ခြေ စသည်တို့ကို အပူလောင်လျှင်ရေတွင်ဆားကိုများများထည့်၊ ပြစ်နေအောင်ဖျော်ပြီး ၎င်းအပူလောင်သည့်နေရာကိုသုတ်လိမ်းပေးပါ။
ကြွက်များသွားလာလေ့ရှိသော နေရာများမှာ ပူစီနံရွက်ဖြစ်စေ၊ပင်စိမ်းရွက်ဖြစ်စေထားပါက ကြွက်များသေချာပေါက်ထွက်ပြေးပါလိမ့်မည်။
စင်ကိုမြက်အား ဆွဲနှုတ်ပြီး အမြစ်ဖြူဖြူလေးတွေကို ဓါးနှင့်ဖြတ်ယူပါ။နို့ဆီဗူးတစ်လုံးစာအား ရေပြောင်အောင် ဆေးပြီး ဒန်အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။နနွင်းမှုန့်ကော်ဖီတစ်ဇွန်းစာလောက် ထည့်ပါ။
ကြက်ခိုးမှိုင်းအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ရေသောက်ရေခွက်နှင့်သုံးခွက်စာထည့် ပြိး တစ်ခွက်စာကျန်သည်အထိကြိုချက်ပါ။ ပြီးလျှင်သေချာစွာ အမှိုက်များစစ်ပြိး နေ့စဉ်သောက်ပါ။ရောဂါရင့်လျှင့် ခုနှစ်ရက်၊ ရောဂါနုလျှင် ငါးရက်နှင့် ပျောက်ပါသည်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူမဝခြင်း၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊မကြာဏသက်ပြင်းချခြင်း၊ မောခြင်းများအတွက် ဂျင်းဆယ့်ငါးကျပ်သားအားကြေအောင်ထုထောင်းပြိး ပြည်ဝင်ဒန်အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။
ဆားလက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ။ပြီးလျှင်ရေများများထည့်ပြိးဆူအောင်ပြုတ်ပါ။ ခြေထောက်စိမ်ရန်ဇလားတစ်ခုခုထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။ ခြေဖဝါးအား ပရုတ်ဆီ(သို့) လိမ်းဆေးအဆီတမျိုးမျိုးသုတ်လိမ်းပါ။ပြီးလျှင် ခြောက်ထောက်နှစ်ချောင်းစလုံးအားဂျင်းပြုတ်ရေ အပူခံနိုင်ရုံထားပြိး စိမ်ပါ။
နောက်တစ်ဦးမှခြေဖဝါးမှာရှိသော အကြောများပြေအောင် လက်မဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးပြီးခြေခုံနှင့် ခြေသလုံး အား သွေးလှည့်ပတ်မှူကောင်းအောင် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ထိုနည်းအတိုင်း သုံးရက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာလာပါလိမ့်မည်။ ။
Categories ဗဟုသုတ Tags လြှို့ဝှကျနညျးလမျး Post navigation
အမြိုးသမီး သားအိမျ အဖုအကွိတျအတှကျ ဆေးနညျး
ကြီးပေါငျး ၊အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးပြောကျတဲ့ မဟျောဂနီသီး